Ungakwandisa njani ukuHamba kwePhepha | Martech Zone
Indlela yokwazisa iphepha lokufika
NgeCawa, Oktobha 21, 2012 NgeCawa, Oktobha 21, 2012 Douglas Karr
Utshintsho nje oluncinci kwiphepha lakho lokufika linokubangela iziphumo ezingcono kwishishini lakho. Ukufika kwamaphepha yindawo ekuya kuyo ukuba ubize-kuthathe isenzo kunye nendawo yotshintsho apho undwendwe luba lukhokele okanye luguqulwe. Nazi ezinye zezinto eziphambili kwiphepha lokufika elilungiselelwe kakuhle. Gcina ukhumbula ukuba asisebenzisi iphepha kuphela kwiinjini zokukhangela, silungiselela iphepha lokuguqula, nathi!
Isihloko Sekhasi -Isihloko sephepha lakho siza kuboniswa kwiziphumo zokukhangela nakwizabelo zentlalo kwaye yeyona nto ibalulekileyo kwiphepha ukurhwebesha umntu ukuba acofe. Khetha isihloko esinyanzelayo, sigcine phantsi koonobumba abangama-70, kwaye ubandakanye inkcazo yemeta eyomeleleyo yephepha- phantsi koonobumba abali-156.
URL -Kuba i-URL yakho ibonisiwe kwiziphumo zokukhangela, sebenzisa i-slug emfutshane, emfutshane, eyahlukileyo yokuchaza eli phulo.
isihloko -Le yeyona nto inamandla kwiphepha lokuhenda undwendwe lwakho ukuba luqhubeke kwaye luzalise ifom. Ukufika kwamaphepha kuhlala kungabikho zinto zokuhambahamba… ufuna ukuba umfundi ajolise kwisenzo, hayi ukhetho. Sebenzisa amagama aqhuba undwendwe kwisenzo kwaye ongeze imeko yongxamiseko. Gxila kwizibonelelo eziya kufunyanwa lundwendwe ngokugcwalisa ubhaliso.
Ukwabelana ngeNtlalo -Dibanisa amaqhosha entlalontle. Abandwendweli bahlala babelana ngolwazi kunye neenethiwekhi zabo. Omnye umzekelo ubhaliso lomsitho iphepha… xa ubhalisela umsitho, uhlala ufuna abanye abakwi nethiwekhi ukuba bazimase umsitho.
umfanekiso -Ukongeza umfanekiso wokuqala wemveliso, inkonzo, iphepha elimhlophe, usetyenziso, umsitho, njl.njl.into ebonakalayo eya konyusa uguquko kwiphepha lakho lokufika.
umxholo -Gcina umxholo wakho kwiphepha lakho lokufika uze ufike kwinqanaba. Sukugxila kwiimpawu kunye namaxabiso, endaweni yoko jolisa kwizibonelelo zokugcwalisa ifom kunye nokuthumela ulwazi lwakho. Sebenzisa izintlu ezineebhulethini, izihlokwana, isicatshulwa esibhalwe ngqindilili nesiqhelaniswa ukugxininisa
yobungqina -Ukongeza ubungqina bokwenyani obuvela emntwini kwaye kubandakanya nomfanekiso womntu wongeza ubunyani kwisithembiso. Bandakanya ukuba ngoobani, basebenza phi, kunye nezibonelelo abazifumeneyo.
imo - imihlaba emincinci kwifom yakho, kokukhona uya kuguqula. Yazisa abantu ukuba loluphi ulwazi oludingayo, kutheni ufuna kwaye uza kulusebenzisa njani.
Iindawo ezifihliweyo -Bamba ulwazi olongezelelekileyo malunga nolundwendwe njengomthombo obhekisa kuwo, ulwazi lomkhankaso, amagama ophando abawasebenzisileyo kunye nalo naluphi na olunye ulwazi olunokukunceda ukuba ubenze babakhokele kwaye ubaguqule babe ngumthengi. Cofa le datha kwindawo yogcino lwedatha ekhokelayo, inkqubo yokuthengisa esizisebenzelayo okanye iCRM.
Legal -Uqokelela iinkcukacha zakho kwaye kufuneka ube nengxelo yabucala kunye nemigaqo yokusetyenziswa ukuze ucacise ngokupheleleyo, ngokweenkcukacha, ukuba uza kulusebenzisa njani ulwazi kubatyeleli
Nanga amanqaku ahambelana nawo anokuba nomdla:
Ungayisebenzisa njani Internet ngempumelelo
Ungalisebenzisa njani iphepha Uphendlo lwaseKhaya
Uyenza njani i Ividiyo yeVidiyo
Uyenza njani eyakho Isihloko seTekisi
Uyenza njani i Blog Post
tags: ukuguqulwa kokusebenzaguqukaimoiphepha lokufikaiifom zephepha lokufikaUkulungiswa kwephepha lokufikaunikaLungiselela iphepha lokufikaukwenziwa kwephepha lobhaliso
I-B2B yeNkqubo yokuKhokelela kwesiZukulwana
Novemba 7, 2012 ngo-10: 56 PM
Ngelixa ndicinga ukuba olu lwakhiwo luza kuba sisiqalo esihle kumashishini athile, kwabanye oku kunokuba nendlela eninzi yokuqhubeka. Ekuphela kwendlela yokwazi ngokwenene kuvavanyo lwe-A / B.
Nov 30, 2012 kwi-5: 39 AM
Iposti entle! Le yinto ekufanele ukuba uyifunde ndiyayixabisa kakhulu. Umsebenzi omhle.